Fitsidihana arak'asa tao Ankazoabo | Primature
Mahazoarivo, 20 oktobra 2020 – Nitohy tao Ankazoabo ny dian’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian nandritra ny fitsidihany ny Faritra Atsimo Andrefana. Nisy ny dinik’asa sy fifanakalozana niarahana tamin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny tany an-toerana, ary nihaona sy nitafa tamin’ny vahoaka ihany koa izy.
Nandritra izany fihaonana izany no nilazan’ny Praiminisitra fa maro ireo fotodrafitrasa efa napetraky ny fitondram-panjakana ary nambarany fa mbola maro ihany koa ireo hapetraka ka hatomboka tsy ho ela ny asa. Ezahina ny hametrahana zavatra maharitra mba ho lovain-jafy manerana ny Nosy, ho fampitoviana lenta ny distrika rehetra manerana an’i Madagasikara. Raha ny ao amin’ny Faritra Atsimo andrefana manokana dia hisy ny fanarenana sy fanamboarana ireo lalana simba ka afaka ny hifamezivezy ny vahoaka ary hifandray ny samy distrika sy kaominina eo anivon’ny Faritra, ka tsy hisy intsony ny fitokana-monina. Eo ihany koa ny fananganana hopitaly manara-penitra, sekoly, toha-drano, “maisons des jeunes”, “complexe sportif”, ary biraom-panjakana isan-tsokajiny. Ary tsy ho ela dia hisitraka ny « bloc opératoire » ny vahoakan’Ankazoabo. Ho fanamorana ny fanadiovana ny tanàna ihany koa dia hahazo « Camion benne” ny kaominina.
Nohamafisin’ny Lehiben’ny governemanta hatrany nandritra izao fifanakalozana izao fa ilaina ny fametrahana fitsinjaram-pahefana tena izy. Izay, hoy izy, no antony nametrahana ireo solon-tenam-panjakana eny ifotony, na olom-boafidy izany na olom-boatendry. Ary ny hisian’izay fanapariaham-pahefana izay no nametrahana ny governoran’ny Faritra. Nomena fahefana izy ireny ka tsy voatery miandry ny fitondrana foibe raha misy asa fampandrosoana ilain’ny Faritra iadidiany. Ankoatra izay dia manana ny tetibola ny Faritra, “midika izany fa tsy ny fahefana manatanteraka fotsiny no nomena ireo governora fa fahefana manapa-kevitra amin’ny asa fampandrosoana”, hoy ny Praiminisitra; eo ihany koa ny fampitaovana.
Mikasika ny sehatry ny fandriampahalemana indray kosa, dia nankasitraka ny ezaka vitan’ny rehetra ny Praiminisitra, na ireo tompon’andraiki-panjakana izany, na ny mpitandro ny filaminana, indrindra ny vahoaka. “Tsapa fa efa miverina amin’ny laoniny ankehitriny ny fandriampahalemana aty amin’ny distrikan’Ankazoabo”, hoy izy, ary izay rahateo no fanamby apetraky ny fitondram-panjakana tarihin’ny Filohan’ny Repoblika. Mba hisian’ny vokatra maharitra anefa dia ilaina hatrany ny fahaizana mandrindra ny fomba fiasa, eo amin’ny samy mpitandro ny filaminana, iray ihany na ny tafika, na ny zandary na ny polisy ka tokony ho hita taratra ny fifamenoana eo amin’ny telo tonta; eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka ihany koa dia tokony hipetraka mandrakariva ny fifampitokisana, hoy ny Praiminisitra teo am-pamaranana.
← Fitokanana ny “Centre spécial d’aguerrissement opérationnel” Beroroha
Conseil du gouvernement du Mercredi 21 Octobre 2020 →
Fidinana tao Fianarantsoa